လင်္ကာ: အနက်မှောင်ဆုံး ပင်လယ်
မှတ်တိုင်လေးမှာ ထိုင်နေကြပြီး စကားစမြီပြောနေကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ နေဝင်းအစိုးရအကြောင်းခင်ဗျားသိတယ်မို့လား။ ၁၉၆၂
စစ်အာဏာသိမ်းကတည်းက ကျောင်းသားဆိုတာဘယ်လိုလူတန်းစားလဲဆိုတာကို သူကသိနေတယ်။ ကျောင်းသားဆိုတာ
မဟုတ်တာကိုငြိမ်ခံနေတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူး။ အမှန်တရားအတွက်ဆိုရှေ့ဆုံးက တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေချည်းပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း
နေဝင်းအစိုးရက ကျောင်းသားတွေအပေါ် အညှိုးတကြီးချေမှုန်းဖို့ကြိုးစားတယ်။ ကျနော်တို့ ကျောင်းရှေ့ကို
အေးအေးဆေးဆေးပြန်ရောက်နေစဉ်မှာပဲ၊ ခဝဲခြံဘက်ကနေ မီးသတ်ကားတွေ ဝုန်းကနဲရောက်လာတယ်။ ဘာမပြောညာမပြောနဲ့
ကျောင်းသားအုပ်ကို ရေနဲ့ပက်ဖြိုခွဲတော့တာပဲ။ ပထမတော့ ကျောင်းသားတွေက ရေတွေကြားမှာ မြနန္ဒသီချင်းဆိုပြီး ကနေကြတယ်။
သိတ်မကြာဘူး။ သေနတ်သံတွေကိုစကြားရတော့တာပဲ။ ကျောင်းသားတွေက ကျောင်းဝင်းထဲကိုဝင်ပြေးဖို့ကြိုးစားလိုက်ကြတယ်။
အုတ်တံတိုင်းကိုခုန်ကျော်နေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ စစ်လုံထ်ိန်းတွေကလည်း ကျောင်းဝင်းအပေါက်နားထိဝင်ပြီးပစ်ကြတယ်။
တချို့ကျောင်းသားတွေကတော့ အုတ်တံတိုင်းကို ကျော်ချနေစဉ်မှာပဲ သေနတ်ကျည်ဆံထိမှန်ကုန်ကြတယ်။
ကျောင်းရှေ့က ရေပန်းအဝိုင်းနားမှာ ကျောင်းသားတယောက် သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့ သွေးတွေလှိမ့်ဆင်းနေတယ်။
သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဆရာတယောက်ကပွေ့ထားတယ်။ အဲ့ဒီဆရာက နှုတ်ခမ်းတဆတ်ဆတ်တုန် ဒေါသထွက်နေတယ်။
“ ဟေ့ကောင်တွေ--- (------) ဘယ်ရောက်သွားလဲ။ ထွက်စမ်းကွာ။ မင်းတို့ ဦးမဆောင်ဘူး ဆိုရင်၊ ငါကိုယ်တိုင်ထွက်ဦးဆောင်မယ်။
ဒါဟာ မတရားသဖြင့်သတ်တဲ့ကိစ္စကွ” တဲ့။ သူလည်း ကျောင်းသားတယောက်လိုဖြစ်နေတယ်။ မှောင်ရီနေတဲ့ ညဦးယံတွေကြားမှာ
တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်နေတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့မျက်နှာတွေမှာ ကြေကွဲမှု၊ မကျေနပ်မှု၊ အစော်ကားခံယူမှုတွေ ကို
ယမ်းနံ့တွေက ကျောင်းထဲမှာ သိမ်းပိုက်နေရာယူထားဆဲလေ။ စစ်လုံထိန်းတွေက ကျောင်းရဲ့လမ်းတဘက်မှာရှိတဲ့
စိုက်ပျိုးရေးဝင်းရှေ့မှာနေရာယူထားကြတယ်။ ကျနော်တို့လည်း ဒဏ်ရာရနေတဲ့ကျောင်းသားတွေကို ဆေးရုံပို့ဖို့ကြိုးစားကြတယ်။
တချို့ဆေးရုံကိုမလိုက်ချင်ကြဘူး။ အစိုးရက ဖမ်းမယ်ဆိုတာသိတော့ အဆောင်တွင်းမှာ ကြိတ်ကုချင်ကြတယ်။ စစ်ရဲတွေကလည်း
ကျောင်းဝင်းထဲကို တဖြည်းဖြည်းရောက်လာကြပြီ။ ဒဏ်ရာရနေတဲ့ကျောင်းသားတွေကို သူတို့ရဲ့ကားဆီ ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆွဲတင်တယ်။
သေဆုံးကေိုဘုန်းမော်ရဲ့အလောင်းကို အတင်းဆွဲယူဖို့ကြိုးစားတော့ ၊ အလောင်းကိုပွေ့ထားတဲ့ ကျောင်းဆရာက ပြောတယ်။
“ဟေ့ကောင်တွေ ငါကျောင်းဆရာပါကွ၊ ဖြည်းဖြည်းသက်သာလုပ်ကြပါ” ဆိုတော့
လုံထိန်းရဲတွေက “ ဘာ ကျောင်းဆရာလည်း -ီး ပဲကွာ။ မင်းလားကွ ကျောင်းဆရာ” ဆိုပြီး ရင်ဝကိုစောင့်ကန်ပစ်တယ်။
သားရဲတွင်းထဲမှာရောက်နေသလိုမျိုးပါပဲဗျာ။ သေနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကို သားကောင်တွေလာဆွဲနေသလိုမျိုးခံစားနေရတယ်။
ကျောင်းသားတွေရဲ့အန်တုဆဲဆိုသံတွေ၊ ခဲနဲ့ပြန်ထုသံတွေကိုပြန်ကြားရတယ်။ ကျောင်းသားတချို့က အဆောင်ရှေ့က
ဓါတ်မီးတိုင်တွေကို မီးလန့်သံချောင်းခေါက်သံလို အချက်ပေးနေကြတယ်။ စစ်တပ်ကလည်းကျောင်းဝင်းထဲက ပြန်ဆုတ်သွားတယ်။
တိုက်ပွဲက အခုမှပြန်စသလိုမျိုးပဲ။ သူတို့ကလည်း ကျောင်းအပြင်မှာ တပ်စွဲနေရာယူထားကြတယ်။
ကျနော်တို့တတွေ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ပင်မအဆောက်အဦပေါ်မှာ ပြန်စုကြတယ်။ တချို့က ကျောင်းထောင့်မှာ ပုံထားတဲ့
သဲတွေ၊ အုတ်ခဲကျိုးတွေကို ယူပြီး ကြယ်ပုံစံအုတ်ဂူလေးကို ဆောက်လုပ်ကြဖို့ ပြင်ဆင်လိုက်ကြတယ်။ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ ဋ္ဌာန
ရုံးခန်းကိုဖွင့်ပြီး သံလျက်တွေ၊ တူတွေ၊ ပေါက်ပြားတွေကိုယူလာကြတယ်။ ကြယ်ပုံစံအုတ်ဂူလေးဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့အခါ
ဒဏ်ရာရနေတဲ့ ကျောင်းသားတချို့ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ဖိနပ်လေးတွေရယ်၊ သွေးစွန်းနေတဲ့ အင်္ကျီလေးတထည်ရယ်၊ ကျည်ဆံခွံတွေရယ်၊
အားလုံးကို အဲ့ဒီကြယ်ပုံစံအုတ်ဂူလေးထဲမှာထည့်လိုက်ကြတယ်။ ကျောင်းသားတယောက်ကတော့ စွယ်တော်ရွက်ခြောက်တွေကို
စီးကရက်မီးနဲ့ညှိလိုက်ပြီး အုတ်ဂူလေးထဲကို ထည့်သွင်းမြှုပ်နှံလိုက်တယ်။
အဲ့ဒီညက ကျောင်းရှေ့မှာ ပန်းတွေပွင့်နေပုံက ရက်ရက်စက်စက်ပဲလေ။
ကျနော်တို့တတွေ အဲ့ဒီပန်းတွေကိုခူးယူပြီး ပန်းခွေတခုလုပ်လိုက်ကြတယ်။
ကျောင်းသားတယောက်က လက်ဝဲစာလုံးနဲ့ ကိုဘုန်းမော်ရဲ့နာမည်ကို ရေးပြီး အုတ်ဂူလေးဆီမှာကပ်လိုက်တယ်။
ကျောင်းနံရံကိုခေါင်းနဲ့စောင့်ငိုကြွေးနေတဲ့ ကျောင်းသားတချို့ရဲ့ အသံကွဲကွဲတွေကလည်း တညလုံးကို ထိုးခွဲထားတယ်။
အမှောင်တွေက ကျနော်တို့ဆီကို အုပ်စုဖွဲ့ပျံသန်းလာသလို၊ ကျနော်တို့ကလည်း မျက်ကန်းသစ္ဆေမကြောက်ဖြစ်နေတယ်။
အရာရာကို နောက်မဆုတ်စတမ်းရင်ဆိုင်ပစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေကသာ တမြေ့မြေ့လောင်ကျွမ်းနေခဲ့တယ်။ “မျိုးသွေး၊ ကျော်ကျော်ထွန်း၊
ထွန်းမြင့်ထွေး၊ ရဲဝင်း၊ ခွန်ထူး၊ လူတင်မြင့်” စခန်းသာဆောင်နဲ့အပြင်ဆောင်မှာနေခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားတွေ
တယောက်မျက်နှာကိုတယောက် ကြည့်နေမိကြပြီး၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကိုတိတ်တဆိတ်ချခဲ့ကြတယ်။ စစ်မြေပြင်လိုဖြစ်သွားတဲ့
တက္ကသိုလ်ပရဝုဏ်အတွင်းမှာ သူတို့ကိုပြန်တုံ့ပြန်ဖို့ဆိုတာ ကျနော်တို့ နှလုံးသားဆီက ယိုစိမ့်ကျနေတဲ့အမှန်တရားနဲ့
ကျားကန်ထားရတယ်။ ကျနော်တို့ အရှုံးပေးလို့မဖြစ်ဘူး။ တခုခုတော့ ပြန်ပြီးတုန့်ပြန်ရလိမ့်မယ်။
မတ်လ (၁၄) ရက်နေ့လည်ခင်း
ဦးခင်အောင်ကြည်ဆိုတဲ့ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်တယောက်အကြောင်းကို တွေးမိလိုက်တိုင်း စိတ်ထဲမှာနာကျင်လာတယ်။
“ ဆရာ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ ကျောင်းသားတွေသေကုန်ပြီ” လို့ပြောတော့ “ မင်းတို့ကွာ နမိတ်မရှိ၊ နမာမရှိ၊ မဟုတ်တာတွေမပြောစမ်းပါနဲ့ဘာမှမဖြစ်ကြပါဘူး။ ဒဏ်ရာလေးနည်းနည်းပါးပါးရတာပါ” လို့
ကျနော်တို့ကိုချွေးသိပ်ရင်းပျောက်သွားတယ်။ သူက လွှတ်တော်အမတ်မှန်းထားပုံရပါတယ်။
ကျောင်းသားတွေက ပါမောက္ခဦးခင်အောင်ကြည်ဆီက လက်မှတ်လိုချင်တာကို တာဝန်ယူမဖြေရှင်းပဲ
ရှောင်ထွက်သွားတယ်။ မော်ကွန်းထိန်းဦးဘိုအေးကတော့ ကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာ ဆက်ရှိနေသေးတယ်။ အစိုးရရဲ့နေ့ခင်းသတင်းတွေထဲမှာကျောင်းသားနဲ့အရပ်သားရန်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျောင်းသားတယောက်သေဆုံးသွားခဲ့တယ် ဆိုတဲ့သတင်းလိမ်လည်မှုကိုပြန်တုန့်ပြန်ကြဖို့
(ဂ) ကိုဘုန်းမော်ဈာပကို ကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင် စီမံပြီး ချခွင့်ပြုရေး
(ဃ) ကျောင်းမပိတ်ရေး အပါအဝင် တောင်းဆိုချက် (၆) ချက်တောင်းဆိုဖို့ သဘောတူခဲ့ကြတယ်။
မော်ကွန်းထိန်းရုံးခန်းကို သ်ိမ်းပစ်လိုက်ပြီး တောင်းဆိုချက်စာရွက်တွေကို ရိုက်ထုတ်ခဲ့ကြတယ်။ ( အဲ့ဒီတုံးက ဂက်စတာနာလိမ့်တာလို့
ခေါ်တယ်)။ ကျောင်းသားနှစ်ယောက်က ပါမောက္ခ ဦးခင်အောင်ကြည် ကို “ ကိုဘုန်းမော်သေဆုံးခဲ့တာဟာ စစ်လုံထိန်းရဲတွေရဲ့
ပစ်ခပ်သတ်ဖြတ်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်” ဆိုတဲ့အချက်ကိုထောက်ခံပေးဖို့ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်။ ဦးခင်အောင်ကြည်က
“ မင်းတို့ငါ့ကိုအကြပ်မကိုင်ပါနဲ့ကွာ။ ငါ့မှာ နှလုံးရောဂါရှိတယ်နော်” ဆိုပြီး ရှောင်ထွက်သွားတယ်။ သူကလမ်းစဉ်ပါတီမှာ
လွှတ်တော်အမတ်မှန်းထားတော့ အစိုးရကိုထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ချင်ပုံမရပါဘူး။ မော်ကွန်းထိန်း ဦးဘိုအေးဆီကတော့
ထောက်ခံလက်မှတ်ရခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့လည်း တောင်းဆိုချက်တွေကို တခြားတက္ကသိုလ်တွေနဲ့အဆောင်တွေမှာ ဖြန့်ဝေရှင်းပြဖို့အတွက်သမိုင်းဝင်းဘက်ဆီကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်။
ကျောင်းရှေ့မှာ လုံထိန်းရဲတွေက ပိတ်ထားတော့ ထွက်လို့မရဘူး။
ကျောင်းအရှေ့ဘက်ခြမ်းအုတ်တံတိုင်းတွေကိုကျော်ပြီး အရှေ့ကြို့ကုန်းရပ်ကွက်တွေကိုဖြတ်၊ တရုတ်သင်္ချိုင်းကိုဖြတ်၊ တချို့က
မှတ်မှတ်ရရ၊ ကျနော်တို့ စဉ့်ကူဆောင်ရှေ့က လမ်းမလေးပေါ်မှာ ဘာအခင်းမှ မပါပဲလှဲအိပ်နေကြတ်။ ည (၈) နာရီသတင်းကို
စောင့်နားထောင်နေကြတယ်။ အဆောင်မှူးဦးသာဒင်က “ မင်းတို့ခံစားနေရတာကို ဆရာနားလည်ပါတယ်ကွာ” လို့
ပြောရင်းအဆောင်တံခါးရှေ့မှာ ပိတ်ထိုင်နေတယ်။ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုအငွေ့အသက်တွေကို သူတွေ့ထိနေရပြီလေ။
အဆောင်အခန်းထဲမှာ ဘယ်သူမှ မနေကြတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ အုပ်စုလေးတွေဖွဲ့ပြီး အဆောင်အပြင်ဘက်ကို
ထွက်ထိုင်နေကြတယ်။ ည (၈) နာရီသတင်းလည်းလာရော၊ အခန်း(၂၁၅) ကနေ အကျယ်ကြီးဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။
သတင်းကြေငြာတဲ့သူက ဦးမောင်မောင်၊ မဆလအစိုးရဟာ သူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှားကိုမတောင်းပန်ပဲ၊ ကိုဘုန်းမော်ဟာ
ရပ်ကွက်ကလူငယ်တွေနဲ့ရန်ဖြစ်ရင်းသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမှားကိုကြေငြာခဲ့တယ်။ ကျောင်းသားအားလုံးဒေါသထွက်သွားကြတယ်။
တချို့က အဆောင်ပြတင်းတံခါးကိုရိုက်ခွဲလိုက်ကြတယ်။ “ ဘာကိုစောင့်နေကြတာလဲ။ ဒါ ငါတို့ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း
စော်ကားလိုက်တာကွ” လို့ တုန်တုန်ရီရီ ကြီးပြောချလိုက်တယ်။ အဆောင်မှူးဦးသာဒင်ကတော့ “ ကဲ သားတို့ရာ မင်းတို့ဒေါသတွေကို
ကြိုက်သလောက် အဆောင်ထဲမှာ ဖွင့်ထုတ်ကြကွာ။ အပြင်ကိုတော့ မထွက်ကြပါန့။ဲ ဒလဘက်မှာလည်း ကုလားဗမာအဓိကရုဏ်းတွေ
စဖြစ်နေတာဆိုတော့ အားလုံးရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်” တဲ့။ သူက နိုင်ငံရေးသိပ္ပံသင်တဲ့သူဆိုတော့ ဘာတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိနေတယ်။
အလွန်ဆုံးတနာရီလောက်ပဲကြာမယ်ထင်တယ်။ ကြို့ကုန်းဆောင်က ကျောင်းသားတချို့ရောက်လာတယ်။ TV ခန်းမဆောင်ထဲမှာ
လူစုခိုင်းလိုက်ပြီး မနေ့ညက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်တွေအားလုံးကို ရှင်းပြတယ်။ ကိုဘုန်းမော်ဈာပနကိုလိုက်လံပို့ဆောင်ကြဖို့
နေ့လည်(၁၂) နာရီကျော်လောက်မှာ ထမင်းစားပြီးတဲ့နောက် ကျနော်တို့တတွေ စဉ့်ကူဆောင်ဘက်ကနေ
တန်းစီပြီးထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ကျနော်တို့နဲ့အတူ ဇီဝက၊ အင်းလေး၊ ပုပ္ပါး၊ ဒူးယားဆောင်က ကျောင်းသားတွေ
ပါတယ်။ ဆရာဦးသာဒင်ကတော့အပြင်ထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ ကျောင်းသားတွေက သူ့ကိုကန်တော့ကြတိုင်း
လူ (၇၀) ကျော်ရှိမယ်ထင်တယ်။ မတ်လရဲ့မွန်းတည့်ချိန်လေဗျာ။ နေကလည်းအရမ်းပူနေသလို၊
ဒေါသနဲု့တုန်ခါနေခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ စစ်တပ်က သမိုင်းလမ်းဆုံကစပြီး ခဝဲခြံထိသံဆူးကြိုးတွေနဲ့ကာထားတာဗျ။
စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေကလည်း မရမ်းကုန်းအထက်တန်းကျောင်းထဲမှာ၊ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်တွေမှာ အပြည့်ပဲ။ စကားပြောစက်တွေနဲ့သတင်းပို့နေကြတယ်။
ကျနော်တို့ကို သမိုင်းလမ်းဆုံမှတ်မှာ ကာထားတဲ့ သံဆူးကြိုးတွေကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။
ဒါပေမဲ့ ခဝဲခြံရှေ့မှာ ပိတ်ထားလိုက်တယ်။ ရှေ့ကိုဆက်သွားလို့မရတော့သလို၊ နောက်ကိုလည်းပြန်ဆုတ်လို့မရတော့ဘူး။
ကျနော်တို့နောက်မှာ အချုပ်ကားပြာပြာတွေ၊ အဓိကရုဏ်းနှိမ်နင်းရေးကားတွေကလည်းပိတ်ဆို့ထားတယ်။ ကျောင်းရှေ့မှာ ဝီစီမှုတ်သံတွေကြားလိုက်ရပြီးတဲ့နောက် သေနတ်ပစ်မဲ့စစ်သားတွေကတတန်း၊ အဓိကရုဏ်းနှိမ်နင်းရေး ဒိုင်းကိုင်စစ်သားတွေက တတန်း၊စုစုပေါင်း (၅) တန်း တန်းပြီးနေရာယူလိုက်ကြတယ်။ ကျနော်တို့ဘက်က ခေါင်းဆောင် (၃) ယောက်တက်သွားပြီး စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောတယ်။ သူတို့ဘက်က အရာရှိကလည်း ကျနော်တို့ဘက်က ရှေ့ကိုဆက်တိုးရင် တခုခုလုပ်အရေးယူရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောတယ်။
နေပြင်းပြင်းအောက်မှာ ကျနော်တို့တတွေ လမ်းမပေါ်မှာ စုထိုင်နေကြတယ်။ တခုစဉ်းစားမိတဲ့အချက်က-
ရပ်ကွက်ဟာ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတွေအပေါ်မှာ အထင်လွဲနေတုံးပဲ။ ကျောင်းသားသေဆုံးခဲ့တဲ့အတွက် ကျောင်းသားတွေက မကျေနပ်လို့ရပ်ကွက်ကိုမီးနဲ့ရှို့ဖို့ကြိုးစားနေတယ်--ဘာညာ ဆိုပြီး အစိုးရက လုပ်ကြံသတင်းနဲ့ဝါဒဖြန့်ထားတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကျနော်တို့တတွေ၊ခဝဲခြံရှေ့မှာ ပိတ်မိနေတဲ့အခါ ပြည်သူတချို့က မလိုလားတဲ့အကြည့်နဲ့စောင့်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ ကျနော်တို့က ပြည်သူလူထုနဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ရန်ဖြစ်ရမဲ့အဖြစ်ကိုရှောင်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ သမိုင်းဝင်းထဲက အဆောင်တွေ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နဲ့တခြားကောလိပ်ကကျောင်းသားတွေနဲ့ပူးပေါင်းဖြေရှင်းကြဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။
မတ်လ (၁၅) ရက်
နေ့လည် (၃) နာရီလောက်မှာ ကျောင်းရှေ့အုတ်ခုံစည်းရိုးပေါ်ကနေ အသံချဲ့စက်တင်ပြီး စစ်တပ်က အော်ပြောတယ်။
ကျောင်းဆောင်တွေပေါ်ပြန်တက်နေကြဖို့ပေါ့။ ကျနော်တို့ကလည်း ကျောင်းဝင်းအတွင်းကနေပြန်ဆဲတာပေါ့။ တချို့က
ပင်မအဆောက်အဦပေါ်ကနေ၊ အဆောင်ပေါ်ကနေ ပြန်ပြီး စိန်ခေါ်ကြတယ်။ မီးလန့်သံချောင်းခေါက်သံတွေ ဆူညံနေတယ်။
သိတ်မကြာဘူး။ “ ကျား---- ကျား-- ကျား---” လို့ အော်ဟစ်ပြီး ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်တခုလုံးကို မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတခုလို
စစ်ဆင်ရေးဆင်တော့တယ်။ စစ်တပ်က ကျောင်းဝင်းတခုလုံးကို သိမ်းပိုက်ပစ်လိုက်တယ်။ ဆရာဆောင်တွေကအစ ဝိုင်းရံထားလိုက်ကြပြီးအပြင်ကို ဘယ်သူမှထွက်မရအောင်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ကြတယ်။
စားသောက်ဆိုင် ကန်န်တင်းရှေ့မှာ ကျောင်းသားနှစ်ယောက်နဲ့စစ်လုံထိန်းတွေ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။
အဆောင်ပေါ်က ကျောင်းသားတွေအားလုံးကို အောက်ဆင်းခိုင်းတယ်။ ကျောင်းရှေ့မှာ စုဆုံထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်။ တချို့က
ဒေါသထွက်လွန်းလို့ ဘေးနားမှာရှိတဲ့ ဒုတ်ကိုဆွဲယူပြီး ရိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေက အဲ့ဒီကျောင်းသားကို ဖမ်းချုပ်ပြီးပထမဦးစားပေးအချုပ်ကားပေါ်တင်ပစ်လိုက်တယ်။
ဆရာတွေနဲ့အတူ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေရောက်လာတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေကို တပုံပြီးတပုံဆွဲထုတ်တယ်။
ကျောင်းသားတွေရဲ့မျက်နှာတွေနဲ့တိုက်ကြည့်တယ်။ ကျောင်းသားအုပ်တွေကို သုံးလေးစုခွဲပစ်လိုက်ပြန်တယ်။
အဲ့ဒီတုံးက ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကလည်း ကျင်းပနေချိန်ဆိုတော့ ကျနော်တို့ကို အပြတ်ရှင်းချင်ပုံရတယ်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဦးမင်းဂေါင် နဲ့ ပညာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမောင်ဒီ ရောက်လာတော့ တင်ထွန်းအောင် ( ဓါတု) က ဝုန်းကနဲထရပ်ပြီး“ ခင်ဗျားတို့သောက်သုံးမကျလို့ ခုလိုမဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်ကုန်ပြီ၊ ဘယ်လိုရှင်းကြမလဲ ” လို့ လက်ညှိုးထိုးပြီး
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် တချို့ကျောင်းသားတွေက ကြောက်စိတ်ကိုမရှိတော့တာ။
အစော်ကားခံရမှု၊ မတရားသဖြင့်နှိပ်ကွပ်ခံနေရမှုတွေကြောင့် အသားတဆတ်ဆတ်တုန် ဒေါသထွက်နေကြတယ်။
ပါမောက္ခဦးခင်အောင်ကြည် ကတော့ ဆေးပုလင်းလေးကို ရှူပြီး ခပ်ရဲ့ရဲ့ရပ်နေတယ်။ ဆရာနှစ်ယောက် က သူ့ကိုတွဲခေါ်လာတယ်။
“ မင်းတို့ဆရာကို မသနားဘူးလား” လို့ ဒေါက်တာမောင်ဒီ က မေးတော့
“ ဘာလို့သနားရမှာလဲ။ သူက အလွန်ဆုံးဖြစ်ရင် ရာထူးပြုတ်ယုံပဲပြုတ်မှာ။ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတွေမှာက ဘဝပျက်သူပျက်၊
သေတဲ့သူသေနဲ့ အမှန်တရာကိုရင်မဆိုင်ရဲတဲ့၊ ကျနော်တို့ကျောင်းသားတွေဘက်က မရပ်တည်တဲ့ဆရာတွေကိုလေးစားစရာမရှိဘူး”လို့
ကျောင်းသားတချို့က ပြန်လည်တုန့်ပြန်လိုက်ကြတယ်။ ကျော်ဆန်းဝင်း (မုံရွေး)၊ တင်ထွန်းအောင်၊ ကျော်နိုင်မင်း၊ စိုးဝင်းနိုင်(သရက်)
မောင်မောင်မြင့် (လားရှိုး၊ ဝင်းမြင့် ( မန္တလေး)၊ကိုတင်လတ် နဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား (၃) ယောက်အပါအဝင်
ကျောင်းသား(၁၅)ယောက်ကို ပထမဦးစားပေး အချုပ်ကားကြီးပေါ်မှာ သီးသန့်ဖမ်းချုပ်ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။
သမိုင်းဆောင်က လာတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတော့ သီးသန့်ကားတကားပေါ်မှာတင်လုက်ိကြတယ်။
သိမ်ကြီးဈေးမှာ ဓါတ်လေးခါးစတပ်ခါစအချိန်လေ။ လူတွေက အဲ့ဒီဓါတ်လေးကားကို စတင်မီးရှို့ပစ်လိုက်ကြတယ်။ လူထုလှုပ်ရှားမှုကို
စတင်လိုက်ကြတယ်။ မဆလ အာဏာရှင်တွေ အရူးမီးဝိုင်းဖြစ်နေပြီ။ သွေးရူးသေွးတန်းတုန့်ပြန်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ စိတ်ထဲမှာ
တော်တော်လေးမကောင်းတဲ့ကိစ္စတခုရှိတယ်။ မြို့ထဲက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေလေ။ သူတို့ဘာသာ ဘာသာရေးဝတ်ပြုပြီး ဗလီပေါ်ကဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာ စစ်လုံထိန်းတွေက ရိုက်နှက်ပြီးအချုပ်ကားပေါ်တင်လိုက်ကြတယ်။ ကျနော်တို့က အဲ့ဒီတုံးက အင်းစိန်သီးသန့်ဆောင်မှာပေါ့။ လူတွေကို သီးသန့်ခန်းထဲမှာ ချုပ်နှောင်ထားဖို့အတွက် အခန်းက မလုံလောက်တော့ဘူး။
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အကျဉ်းသမားအသစ်တွေရောက်လာတော့ အင်္ကျီတွေချွတ်ပြီးရေညှစ်နေကြတာကို
မြင်တဲ့အခါ ကျနော်တို့က မေးတယ်။ “ ခင်ဗျားတို့ကို ရေပိုက်နဲ့ထိုးခွဲပြီး ဖမ်းဆီးခဲ့တာလား” လို့
” ဘယ်ကလာဟုတ်ရမှာလဲ။ အချုပ်ကားထဲမှာ ပြည့်သိပ်နေအောင်ဖမ်းချုပ်ထားခဲ့တာ အသက်ရှုမဝသလို၊ လှုပ်လို့မရဘူး။ဒါက ချွေးတွေဗျ”လို့ သူတို့က ပြန်ဖြေတယ်။ နောက်မကြာဘူး။ အပြင်မှာ သေနတ်သံတွေကြားရတယ်။
အင်းစိန်ထောင်ကို ဂျီတီအိုင်ကျောင်းသားတွေနဲ့လူအုပ်ကလာရောက်ဝိုင်းကြတဲ့အတွက် အာဏာပိုင်တွေက ပစ်ခပ်နှိမ်နင်းနေတာတဲ့။
အဲ့ဒီညက လက အရမ်းသာနေတာဗျာ။သစ်ရွက်ခြောက်တွေရွေ့နေပုံက ကျောစိမ့်ဖို့ကောင်းတယ်။
လူသေတွေ၊ မသေမရှင်တွေ ဝေါကနဲအန်ကျလာတာကို အတိုင်းသားမြင်နေရတယ်။
ဘဝတလျောက်လုံး အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကြီးက ခြောက်လှန့်နေတာဗျာ။ ကျနော့်နယ်က အိ်ိမ်ကို ပြန်ရောက်သည်အထိ လသာတဲ့ညဆို
အိမ်ရှေ့ကွင်းပြင်ကို မကြည့်ရဲဘူး။ အလောင်းတွေကို ဘယ်သူတွေလာကောက်မလဲ လို့ အထိတ်တလန့်တွေးနေမိတယ်။
ပင်လယ်ဆိုတာ တခါတလေ လုံခြုံမှုမရှိပါဘူး။
ကမ်းခြေတခုလုံးမှောင်မဲသွားတဲ့အခါမျိုးကျရင် ကြောက်စိတ်ကိုဖယ်ပြီး အသံတိတ်ရောက်လာမဲ့အန္တရာယ်ကို စိတ်ထဲမှာ
အကြိမ်ကြမ်မျှားယူနေမိတယ်။ မတ်လ ရဲ့လေရိုင်းတွေက ကျနော်တိုိ့ကို သန်မာစေခဲ့တယ်။ သမိုင်းရဲ့အပြောင်းအလဲကို လှုပ်ခါပြောင်းလဲစေမဲ့
ကျောင်းသားတိုက်ပွဲတွေ မတ်လရဲ့နေပြင်းပြင်းတွေထဲ ကခုန်နေကြတယ်။ အမှောင်ထဲမှာ ကျနော်တို့ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ရဲ့
ပင်မအဆောက်အဦလှေခါးထစ်လေးပေါ်မှာ ခဏခဏပြန်ပြီး ထိုင်နေမိတယ်။
“ခင်ဗျားနင်းလိုက်တဲ့ မြေမှုန်လေးတွေက အစ နှစ်သက်လိုက်တာဗျာ” လို့ ပြောမဲ့ ကဗျာဆန်ဆန် ကောင်လေးတွေမရှိ၊
လွယ်အိပ်ထဲကို အမှတ်မထင်လက်နှိုက်ကြည့်လိုက်မိတော့ ---
လက်ဝဲစာလုံးနဲ့ရေးထားတဲ့ မတ်လ (၁၃) ဆိုတဲ့ စာရွက်လေးတခုရယ်--
အော်--- ဒီည လမသာတာကောင်းမယ် ထင်ပါရဲ့
Thein Win ကိုအောင်မိုးဝင်း ရေ ..ကိုဖုန်းမော်အလောင်း ကို ပွေ့ထားတဲ့ ဆရာက ..ဆရာဦးသိန်းထွန်းအောင် ထင်တယ်...ဆရာလည်း လုံထိန်းတွေ တွန်း ထိုးတာ ခံရသေးတယ်....၁၄ ရက်နေ့ညနေ ကျောင်းကို ၀င်စီး ပြီး ဖမ်းသွားတာ ၁၆၀ လောက် ရှိမယ်...
Aung Moe Win အမှန်ပဲ ကိုသိန်းဝင်။ ဦးသိန်းထွန်းအောင် က “ ထွန်းအောင် ဘယ်ရောက်နေလဲ ထွန်းအောင် ဘယ်ရောက်နေလဲ၊ ဘယ်သူ မှ ဦးဆောင်မထွက်ရင် ငါထွက်မယ် ” လို့ ပြောခဲ့တယ်မို့လား
Still can't forgetafew sandles, blood stains,acloths or shirt torn and shells of bullets, etc placed inastar-patterned grave built at the entrance of Aww-Bar lane under Building 1. Also could be found some marks of bullets on the wall of library facing the water-feature in the garden. Appreciate ur post brought me to bitter past, AMW..